Dunida Malaa'igaha, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Malaa'igahu waa jinniyo, malaa'igo iyo addoommo Eebbe. Waxay door gaar ah ka ciyaaraan afar dhacdo oo muhiim u ah nolosha Ciise isla markaana Ciise mar mar ayuu u yeeray iyaga oo baray maadooyin kale.
Injiillada looguma talagalin inay ka jawaabaan dhamaan su'aalaheena ku saabsan malaa'igaha. Waxay na siinayaan oo keliya macluumaad labaad marka ay malaa'igtu soo galaan masraxa.
Sheekada Injiilka, malaa'igahu waxay hor marayaan Ciise hortiisa. Jibriil wuxuu u muuqday Sakariyas si uu ugu dhawaaqo inuu wiil yeelan doono - Yooxanaa Baabtiisaha (Luukos 1,11-19). Jibriil wuxuu sidoo kale u sheegay Maryan inay lahaan doonto wiil (Aayadaha 26aad). Waxaa riyo ugu sheegay Yuusuf riyood markuu riyooday (Matayos 1,20: 24).
Malaa'ig baa ku dhashey dhalashadii ciise inuu u daajiyo adhijirrada iyo ciidan jannada ah oo Ilaah ammaaney (Luukos 2,9-15). Mar labaad ayaa malaa'igtii mar kale u muuqatay Yuusuf riyooyin si ay ugu sheegto inuu u cararo Masar ka dibna markale ay nabdoon tahay in la soo noqdo (Matayos 2,13.19).
Malaa'igahu mar labaad ayaa lagu sheegay isku dayga Ciise. Shaydaanka ayaa soo xigtay marin ka mid ah Kitaabka Quduuska ah oo ku saabsan ilaalinta malaa'igaha iyo malaa'igta u adeegtay Ciise markii jirrabaadda la idlaaday (Matayos 4,6.11). Malaa'ig baa Ciise ku caawisay beertii Gethsemane intii uu socday jirrabaad aad u daran (Luukos 22,43).
Malaa'igahu waxay door muhiim ah ka qaateen sarakicidda Ciise, sida afarta Injiil ee ay inoo sheegeen. Malaa'igtii baa dhagxiisay oo dumarkii u sheegtay in Ciise la sara kacay (Matayos 28,2: 5). Haweenku waxay arkeen malaa'ig ama labo xabaashii (Markos 16,5; Luukos 24,4.23; Yooxanaa 20,11).
Malaa'ig ilaahdu waxay muujiyeen muhiimadda sarakicidda.
Ciise wuxuu sheegay in malaa'igtu sidoo kale door muhiim ah ciyaari doonaan markay soo noqdaan. Malaa'igahu way la socon doonaan markuu soo noqdo oo waxay soo ururiyeen kuwii la doortay si loo badbaadiyo iyo kuwa xun oo halaagga loo halligo (Matayos 13,39: 49-24,31;).
Ciise wuu u yeeri lahaa cutub malaa'igo, laakiin isagu ma uusan weydiisan iyaga (Matayos 26,53). Waad la socon doontaa markuu soo laabto. Malaa'igaha ayaa ku lug yeelan doona xukunka (Luukos 12,8-9). Xilligani waa wakhtigii ay dadku arki lahaayeen malaa'igaha “oo kor iyo hoos ugu dhaadhaca Wiilka Aadanaha” (Yooxanaa 1,51).
Malaa'igahu waxay u muuqan karaan qof ahaan ama sharaf aan caadi ahayn (Luukos 2,9; 24,4). Iyagu ma dhintaan mana guursadaan, taas oo sida muuqata macnaheedu tahay inaysan jinsi lahayn isla markaana ma dhalaan (Luukos 20,35-36). Dadku mararka qaarkood waxay aaminsan yihiin in dhacdooyinka aan caadiga ahayn ay sababaan malaa'igaha (Yooxanaa 5,4: 12,29).
Ciise wuxuu yidhi "yaryarkan aniga i rumaystaa" waxay leeyihiin malaa'igo jannada ku jira oo daryeela (Matayos 18,6.10). Malaa'igahu way faraxsan yihiin markay dadku u soo jeestaan ​​xagga Ilaah oo ay malaa'igtu u soo dejiyaan kuwa xaqa ah oo jannada geli (Luukos 15,10; 16,22).